Advanced Offline Dictionary Android အတွက် APK ဒေါင်းလုပ်ရယူပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အဆင့်မြင့်ကိုအော့ဖ်လိုင်းအဘိဓါန်
အဆင့်မြင့်ကိုအော့ဖ်လိုင်းအဘိဓါန် APK ကို
* လုံးဝအော့ဖ်လိုင်းအလုပ်လုပ်! အဘယ်သူမျှမအင်တာနက်ချိတ်ဆက်လိုအပ်! သင့်ရဲ့လေ့လာမှုတွေအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော!
* synonym တွေဟာနှင့်အတူ 300,000 ရိုးရှင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျော်နှင့်အတူ Thesaurus ။
- Search ကိုကွဲပြားခြားနားသောစံနှုန်းများကို အသုံးပြု. : စကားလုံးက start, အတိအကျကိုပွဲစဉ်သို့မဟုတ်မည်သည့် substring
* Android ရဲ့ built-in Text-to-စကားပြောစုပေါင်းနှင့်အတူအမေရိကန်သို့မဟုတ်ဗြိတိန်ဝဲသုံးပြီးအဓိပ္ပာယ်နားထောင်ပါ။
* နှစ်ခုဖောင်အရွယ်အစားနှင့်အတူအဓိပ္ပာယ်ဖတ်ပါ။ ဖုန်းများနှင့် tablet များအတွက် optimized!
* သင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့ data တွေကိုကယ်တင်သည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်အဆိုပါ app ကို SD ကဒ်ထဲမှာသူ့ဟာသူအလိုအလျောက်တပ်ဆင်ပြီး။
* သင့်ရဲ့ဝေါဟာရကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ! အမေရိကန်အင်္ဂလိပ် synonym တွေဟာ / နာမ်, စကားလုံးအင်္ဂလိပ်, verb ကြိယာ, နှင့်ပိုပြီးတွေ့ပါရန်စံပြအဘိဓာန်။
ဒီ app ကြော်ငြာတွေကထောက်ခံသည်။ သငျသညျအပလီကေးကြိုက်နှစ်သက်လျှင်, ဖှံ့ဖွိုးတိုးတထောကျပံ့ဖို့ကြော်ငြာအခမဲ့ဗားရှင်းအဆင့်မြှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်🙂
ဖြေရုံဘာသာပြန်ကျော်စာနယ်ဇင်း 2-3 စက္ကန့်နှင့်သင်သည်သင်၏ကိရိယာ (အီးမေးလ်, SMS စသည်တို့) တွင် install လုပ် apps များအပေါ် အခြေခံ. dictionery options များအားလုံးကိုရရှိနိုင်ခွဲဝေမှုနဲ့ menu ကိုအတူတင်ပြပါလိမ့်မည်
ဖြေ -> Settings နဲ့ဘာသာစကားကို select လုပ်ရုံ Menu ကိုသွားပါ။ လောလောဆယ်2အင်္ဂလိပ်အသံထွက်ရရှိနိုင်ပါသည်:
* အင်္ဂလိပ် (ယူအက်စ်)
* အင်္ဂလိပ် (GB အထိ)
text-to-speech (၏ TTS) နည်းပညာအချို့ကိရိယာများအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအသံပေါင်းစပ်၏နိုင်မယ်ဆိုရင်စစ်ဆေးရန်: Menu ကို -> Settings -> Voice ကို input ကို & output ကို -> Text-to-မိန့်ခွန်း settings ကို။
မတပ်ဆင်ရသေးပါလျှင်, သင့်ကိရိယာ၏ TTS အင်ဂျင်ကိုတပ်ဆင်ရန်သင်မေးလိမ့်မည်။ အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ data တွေကိုအခွန်ကအရမ်းစျေးကြီးဖြစ်နိုင်သည်ရုမ်းမင်းအဖြစ်ခရီးသွားလာရှေ့မှာကို install အကြံပြုပါသည်။
- Webster ရဲ့တည်းဖြတ်မူ Unabridged အဘိ (1913), လူထုဒိုမိန်းသယံဇာတ။
- WordNet®, အဘယ်သူ၏ဒီဇိုင်းလူ့ lexical မှတ်ဉာဏ်၏လက်ရှိ psycholinguistic သီအိုရီအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်တစ် lexical ရည်ညွှန်းစနစ်။ အင်္ဂလိပ်နာမ်, ကြိယာ, adjective နာမဝိသေသနနှင့်ဖိုင်လင့်များပါသည့်တစ်လုံးကိုအဓိပ္ပာယ်တူ synonym စုံ, တစ်ဦးချင်းစီကိုကိုယ်စားပြုတဦးတည်းနောက်ခံ lexical အယူအဆသို့စည်းရုံးနေကြပါတယ်။
27.57 ကို MB